Ku marooji Water Chiller - Industry Shiinaha Ningbo Hicon
Naga soo wac: 0086 574 62132957
Baakadeeyey Air hagaajiye
Saqafka sare baakadeeyey AC
Air qandaca koollo Split nooca AC
Air Chiller Biyaha qandaca
Biyaha qandaca ahi Biyaha Chiller
Ku marooji Water Chiller
fur daadadku Water Chiller
Qaybin Water Chiller
Biyaha Source Heat saar
Water in bamka kulaylka Air
Water in bamka kulaylka biyaha
Evaporative Nooca Water Chiller
Unit Hot Air Source Total Heat Recovery Water kululeeyaha
dabbaasho AC unit
Air qandaca Floor Joogtada AC
Qaybta Biyaha qandaca
Biyaha la qaboojiyey oo la soo baakadeeyey AC
Unit Telecom Air hagaajiye
unit meeldhexaadka ah saldhigga Base
Unit Crane Cab meeldhexaadka ah
Split Floor Joogtada Unit
Split Wall unit Jaha
unit Saqafkii Jaha kala jabeen
waxqabadka sare wiish A / unit C
Low-meel gaarka chiller dareere
chiller biyo sharikadaha-sare
Marine & HVAC la olloga ah
AC keenida Unit
Unit Qabashada Air
Unit ee Xidhmada AC
Air qandaca Self ku jira AC
Biyaha qandaca Self ku jira AC
Air qaboojiyey baakadeeyey AC
Unit keenida Bixinta
Unit Air meeldhexaadka ah
Fan gariiradda Unt
Fan gariiradda Unit
Unit Horizontal qarinaayay
Unit Horizontal la kashifay
Vertical qarinaayay Unit
Unit Vertical la kashifay
Unit Wall Fardoolayda
Unit saqafka qarinaayay
Unit saqafka la kashifay
AC Heat Iskubedelka
Panel Air hagaajiye
nooca qayladii waxay jeelyihiin in Low
Unit qoreysa: unit 1. waa shirkad wax soo saarka classic, ku siin karaan R22, R407C, R134A saddex nooc oo refrigerants si loo buuxiyo shuruudaha ka mid ah dalalka iyo gobollada kala duwan. kala duwan oo awood 2.Supre-ballaaran ka 170KW ~ 4800KW aad xulashada ballaaran, waxay bixisaa unit la 1,2,3,4 kombaresarada. 3.Beerta unit siin karaan 8 fasal ee min 12.5% ​​xeerka tamarta looga baahan yahay si ay u qanciso macaamiisha ah ee tamarta lagu badbaadinayo. 4.The unit taxane siin kara soo kabashada kulaylka functionsof 30%, 50%, 75%, 100% sida dib u ...
1. unit waa shirkad wax soo saarka classic, ku siin karaan R22, R407C, R134A saddex nooc oo refrigerants si loo buuxiyo shuruudaha ka mid ah dalalka iyo gobollada kala duwan.
kala duwan oo awood 2.Supre-ballaaran ka 170KW ~ 4800KW aad xulashada ballaaran, waxay bixisaa unit la 1,2,3,4 kombaresarada. 3.Beerta unit siin karaan 8 fasal ee min 12.5% ​​xeerka tamarta looga baahan yahay si ay u qanciso macaamiisha ah ee tamarta lagu badbaadinayo. 4.The unit taxane siin kara soo kabashada kulaylka functionsof 30%, 50%, 75%, 100% sida looga baahan yahay qofka macaamilka. 5.The unit qaadanayaa ku-waxqabadka sare brand caan ah iyo compreesor srew semi-hermetic iyo oolnimada sare qolof & tube kulaylka exchanger.The COP celcelis ahaan waa ka sii sarreeyaa 4.5.
brand 6.SIEMENS PLC xakamaysada ah, qaab deggan iyo hawlgal fudud.
7.The kulka biyaha la qaboojiyey in la beddelo ayaa laga yaabaa 5 ℃ 15 ℃, oo loo isticmaali karo codsiga warshadaha. 8.The unit ayaa hindisooyin badan ilaalinta iyo hawlaha, oo ay ku jiraan ilaalinta awoodda
(Sida la'aanta waji, anti-waji,), ilaalinta motor kombaresarada, sharikadaha gaaska saaray in ka badan-sare ilaalinta, karka / hooseeyo, anti-keydsho, ilaalinta dollar kombaresarada, sharikadaha biyo overlow ilaalinta.
Previous: fur daadadku Water Chiller
Air qandaca Ku marooji Chiller Price
Air qandaca xiri Chiller
Air Ku marooji Chiller
Qaboojiyey Ku marooji Chiller
Double Ku marooji warshadaha Biyaha Chiller
High hufan Ku marooji Water Chiller
Industrial Air Ku marooji Chiller
Warshadaha Ku marooji Chiller
warshadaha Ku marooji Water Chiller
Warshadaha Biyaha qandaca ahi marooji Chiller
Recirculating Ku marooji Chiller
Ku marooji Air qandaca Chiller
Ku marooji Air biyo Chiller
Ku marooji Chiller Price
Ku marooji Marine Water Chiller
Ku marooji Nooca Biyaha qandaca ahi Chiller
marooji Nooca Biyaha qandaca ahi Chillers
Ku marooji biyaha qandaca Water Chiller
Biyaha Chiller Ku marooji Chiller
Biyaha qandaca Ku marooji Chiller Waayo Sale
Biyaha qandaca Ku marooji Chillers
Biyaha qandaca Ku marooji Water Chiller
Biyaha Ku marooji Chiller
Hot Air Source Total Heat Recovery Water kululeeyaha ...
Ningbo HICON Warshadaha CO., LTD